MEMTEST86 7.5.1001 DOWNLOAD MAKA WINDOWS 7 - MMEMME NYOCHA - 2019
Dị ka ị maaraworị, na Microsoft Word enwere nnukwu nchịkọta nke ihe odide pụrụ iche na akara, nke, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, nwere ike itinye ya na akwụkwọ ahụ site na iche iche menu. Anyị edeworị banyere otu esi eme nke a, ma ị nwere ike ịgụtakwu banyere isiokwu a n'isiokwu anyị.
Ihe omumu: Fanye ederede pụrụ iche na akara na Okwu
Na mgbakwunye na ụdị ihe nnọchianya niile na akara, ị nwekwara ike ịtinye usoro dị iche iche na usoro mgbakọ na mwepụ na MS Okwu site n'iji ndebiri dị njikere ma ọ bụ mepụta onwe gị. Anyị deekwara banyere nke a na mbụ, na n'isiokwu a, anyị chọrọ ikwu banyere ihe metụtara isiokwu ọ bụla dị n'elu: otu esi tinye akara ngosi ego n'ime Okwu ahụ?
Ihe omumu: Esi tinye okwu na Okwu
N'ezie, ọ bụrụ na ọ dị mkpa ịgbakwụnye akara a, ọ gaghị edozi ebe ị ga - achọ ya - na akara ngosi ma ọ bụ na usoro mgbakọ na mwepụ. N'okpuru ebe a, anyị ga-akọwa ihe niile.
Ihe nchoputa bu ihe omuma nke oma, na Okwu ya di na mpaghara "Njirimara Ndị Ọzọ", karịchaa, na ngalaba "Ndị ọrụ mgbakọ na mwepụ". Ya mere, iji gbakwunye ya, soro usoro ndị a:
1. Pịa na ebe ịchọrọ ịgbakwunye akara ego ma gaa na taabụ "Tinye".
2. Na otu "Ihe Atụ" pịa bọtịnụ ahụ "Akara".
3. Na windo na-egosi mgbe ịpịpị bọtịnụ ahụ, a ga-enye ụfọdụ mkpụrụ edemede, mana ị gaghị achọta akara nchịkọta (ọ dịkarịa ala, ọ bụrụ na i jiribeghị ya tupu). Họrọ ngalaba "Njirimara Ndị Ọzọ".
4. Na igbe "Akara"nke na-apụta n'ihu gị, họrọ site na menu ndenye menu "Ndị ọrụ mgbakọ na mwepụ".
5. Chọta ihe ịrịba ama n'etiti akara akara ahụ ma pịa ya.
6. Pịa "Tapawa" ma mechie igbe "Akara"iji nọgide na-arụ ọrụ na akwụkwọ.
7. A ga-atụkwasị ihe ịrịba ama ego ahụ na akwụkwọ ahụ.
Ihe omumu: Etu esi tinye akara ngosi dị na MS Okwu
Iji koodu ka itinye ngwa ntinye ngwa ngwa
Onye ọ bụla agwa dị na "Ihe Atụ" nwere koodu nke aka ya. Ịmara ya, nakwa dịka otu njikọ pụrụ iche pụrụ iche, ịnwere ike ịgbakwunye ihe ọ bụla, gụnyere akara ngosi, ọtụtụ ngwa ngwa.
Ihe omumu: Ejiri ọkụ na Okwu
Ị nwere ike ịchọpụta koodu agwa na igbe. "Akara", ọ bụ iji pịa akara ahụ achọrọ.
N'ebe a, ị ga-ahụ nchikota nchịkọta nke ịchọrọ iji iji tọgharịa nọmba ọnụọgụgụ na agwa achọrọ.
1. Pịa na ebe akwụkwọ ahụ ebe ịchọrọ itinye akara ego.
2. Tinye koodu “2211” enweghị nzacha.
3. Ọ bụrụ na ị na-akwagharị onye ọbụla site na nke a, pịa igodo "ALT + X".
4. Usoro nke ị banyere ga-eji dochie anya akara ego ahụ.
Ihe omumu: Otu esi tinye n'ime okwu ogo Celsius
Nanị ka ị nwere ike ịgbakwunye okwu ntinye na Okwu ahụ. N'otu igbe ahụ, ị ​​ga - ahụ ọtụtụ akara dị iche iche na akwụkwọ pụrụ iche, nke a na-esite n'usoro isiokwu.
Mee 2 2.0
Esi ewegharịa video na Sony Vegas
Chọpụta ego RAM na PC
Nchọgharị nzaghachi ntaneti na Yandeks.Browser
Ọtụtụ mgbe, ndị ọrụ nke netwọk mmekọrịta dị na VKontakte dị mkpa ka ha zipu onyinye ọ bụla, nke gụnyere postcard. N'ime isiokwu a, anyị ga-atụle ụzọ niile dị mkpa iji dozie nsogbu a. Na-ezipụ akwụkwọ ozi na VKontakte site na kọmputa N'ihi ọnụnọ nke ohere dị ukwuu na ọrụ mmadụ na ajụjụ. GụKwuo
Ighapu Akaụntụ Steam gị
Esi gosi faịlụ na nchekwa na Windows 7